18 Nivavaka momba ny ady amin'ny ady ny ady atao amin'ny ady | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 18 Nivavaka momba ny ady amin'ny ady atao amin'ny fanambadiana ny ady
18 Nivavaka momba ny ady amin'ny ady atao amin'ny fanambadiana ny ady
6 Ka dia tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany. Ary noho izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aza avela hampisaraka ny olona izy.
fanambadiana dia rafitra nanendren'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra tanteraka ny handaoan'ny reniny sy ny rainy ny iray, ny hiray amin'ny vadiny ary ho tonga nofo iray izy roa. Androany isika dia tokony handray anjara amin'ny vavaka vavaka 18 momba ny ady amin'ny hery manohitra ny fanambadiana. Fantatsika tsara fa ny devoly dia any foana mba hamaha ny hoavin'ny zanak'Andriamanitra, ny tahan'ny mariazy be dia be ankehitriny dia porofon'ny devoly miasa eo amin'ny fiainan'ny mpino. Amin'ny alàlan'izany Torohevitra mivavaka amin'ny ady, dia hametraka ity maizina ity isika hery ny helo toerana misy an'i Jesosy amin'ny anaran'ny tenany izy ireo. Izahay dia hananatra, mamehy ary handroaka ny demonia manohitra ny fanambadian'ny fianakavianao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny adin'ady, miaro ny devoly ary handositra ny fanambadianareo mandrakizay izy. Amen
Fiatrehana ny tafika manohitra ny fanambadiana.
Inona avy ireo hery manohitra ny fanambadiana? Ireo fanahy demonia dia manohintohina ny fandriampahalemana isaky ny fanambadiana. Io hery satanika io no tompon'andraikitra amin'ny korontana rehetra sy korontana amin'ny mariazy. Mpivady maro no miaina toy ny olon-tsy fantatra ao an-tranony noho ity herin'ny demonia ity. Ny tahan'ny fisaraham-panambadiana sy ny tsy fivadihana amin'ny fanambadiana dia porofon'ny hery manohitra ny fanambadiana any am-piasana. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao, tsy maintsy mitsangana ianao ary manohitra ny devoly manohintohina ny fanambadianao. Aza mijanona fotsiny ary avelao ny Devoly hampiely ny fandriam-pahalemana ao an-tranonao, tsy maintsy mandeha amin'ny vavaka ady ianao. Ity vavaka vavaka ity dia manasongadina ny hiatrehana ny hery manohitra ny herin'ny fanambadiana. Mandra-pialanao sy hivavaka, io hery io dia hanohy ny fampahoriana anao amin'ny fanambadianao mandra-pahalany ny tokantranonao, saingy rehefa manohitra azy ireo ianao ankehitriny dia mahita an'Andriamanitry ny famerenana amin'ny laoniny, mamerina amin'ny laoniny ny fanjakana be voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha amin'ny finoana ary manome ireo fahagagana amenao ireo valin'ny ady.
1. Mandidy ny mpanolotsaina ratsy rehetra aho manohitra ny fanambadiako ho faty sy ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Amin'ny alàlan'ny afo tsy mety maty, dia mandringana ny fiarahana tsy masina rehetra eo amin'ny vadiko / vadiko sy izay lehilahy / vehivavy hafahafa, ankehitriny !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Mandidy ny rafozian'ny demonia aho mba hamaha ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Dada ô, mamoaka ny Afonao aho isaky ny fanahy manambady ary vadin'ny fanahy miteraka korontana amin'ny fanambadiako amin'ny anaran'i Jesosy
5. Ny ozona rehetra navoaka momba ny fanambadiako, dia esorina ary averina any amin'ilay mpandefa izay misy olona liana amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Amin'ny Ràn'i Jesosy, manasa ny tenako aho ho madio amin'ny fanahin'ny demonia rehetra amin'ny tsy marim-pototra amin'ny anaran'i Jesosy
7. Ny fanahy rehetra nolovaina avy amin'ny raiko na ny ray aman-dreniko miady amin'ny fanambadiako dia hanjary mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny ozona rehetra navoaka momba ny fanambadiako na amin'ny fiainam-panambadianao, ho rava amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Avelao ny vokatry ny lanonana rehetra natao tamin'ny andro fampakaram-bady sy efa niasa tamiko, dia foanana sy horavana amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ny vola ara-panahy rehetra angonina ho ahy, dia miverina aminao amin'ny mpandefa aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Ny fanambadiana ara-panahin'ny vadiko / vadiko amin'ny reniny dia ho ravana amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Ny hery rehetra izay milaza fa tsy hankafy ny fiainam-panambadianao, dia ringana izao !!! amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Mandidy ny vady / vadiko mandositra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Ry fanahy ny fandringanana ny fanambadiana, hofatorana, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Mandidy ny ozona rehetra amin'ny vadiko aho mba hivadika ho fitahiana, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Mandidy ny ratsy rehetra nataon'ny namanao hafahafa aho amin'ny ankohonako, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Manafaka ny namako amin'ny tranon'ny demonia rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
18. Misaotra an'i Jesosy noho ny namaliako ny vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra25 Ireo teboka vavaka ho amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanambadiana
Next lahatsoratra20 Fanehoana fangatahana vavaka amin'ny fanoherana ny tokantrano
Emperor Victoria 22 aogositra 2020 Amin'ny 4:50 maraina
Misaotra betsaka noho ny resaka vavaka mahery. Nisaraka tamin'ny vadiko nandritra ny folo taona aho izao, manan-janaka efatra izahay, miaraka amina vehivavy hafa manana zanakalahy ho azy izy izao, te hisaraka izao, nivavaka aho ary niangavy azy hiverina ihany fa izany rehetra izany manaporofo fa zava-poana ny fialany, ary koa dimy taona nisarahako dia nifanena tamina olona iray izay naneho fahalianana tamiko aho fa tany France kosa dia efa niresaka izahay, heveriko fa manomboka tiako ny azy dia misavoritaka indrindra aho izao momba ny loha-vavako.
Zava-bavaka 30 ho an'ny fanadiovana ara-panahy
Drafitra famakiana Baiboly isan'andro ho an'ny 9 Novambra 2018
70 Teboka hivavaka ho an'ny lanitra misokatra